ISebe & Expert - Shijiazhuang YiLing Hospital
esibhedlele YiLing Chinese iqondo eliphezulu esibhedlele labucala amayeza emveli ase-China eTshayina. Iqela ingcali enamandla esibhedlele ubunjwe-29 academicians ka-Chinese Academy of Sciences kunye ubugqirha kunye neengcali aphesheya ukubuyela. Iindibaniso unyango yaseTshayina kunye Koloni iindlela zonyango ezizodwa kunye neziphumo zonyango ukunyanga izifo ezahlukahlukeneyo eziqhelekileyo, izifo ezingapheliyo kunye nezifo kakhulu.
Ingakumbi amakhono ephambili kwiPhondo China kunye Hebei, ezifana isebe izihlunu yoma, isebe isifo samathambo, isebe seswekile, isebe nephrotic, isebe ithumba kunye namanye amasebe, unyango lwe yoma spinal dystrophy, isifo neuron iimoto, scleroderma, udinwe, rheumatism, isifo seswekile, isifo sezintso, zonke iintlobo zomhlaza kunye nezinye izifo zisekuhleni kanye.
unyango olusebenzayo uncedo izigulane abasuka kumazwe angaphezu kwama-20 kunye neziphaluka ehlabathini. Kuba unyango lwesifo, nceda ushiye thina umyalezo okanye uqhagamshelane kunye neengcali.